सासू-बुहारीको सुमधुर सम्बन्धः पारिवारिक सुखको श्रोत सासू-बुहारीबीच किन हुन्छ खटपट ? | Radio Republic 88.2 MHz
Home जीवनशैली/स्वास्थ्य सासू-बुहारीको सुमधुर सम्बन्धः पारिवारिक सुखको श्रोत सासू-बुहारीबीच किन हुन्छ खटपट ?
सासू-बुहारीको सुमधुर सम्बन्धः पारिवारिक सुखको श्रोत सासू-बुहारीबीच किन हुन्छ खटपट ?
सासू-बुहारीबीच झगडाः परिवारलाई झमेला
हाम्रो वरपर समाजमा धेरै सासूबुहारी बीचमा मनमुटाव भएको देख्न सकिन्छ । कतिपय स्थितीमा त यस्तो मनमुटाव बढ्दै गएर यसले पारिवारिक कलहकै रुप पनि लिन्छ र अन्यमा छोरा बुहारी बीच नै सम्बन्धविच्छेद पनि हुने गर्छ ।
किन हुन्छ सासूबुहारी बीच झगडा ?
सुरुमा समाजको सोंच यस्तो हुन्छ कि पारिवारिक झगडाको मुख्य कारण पक्कै पनि सासूको नराम्रो व्यवहार होला । झगडिया वा अनावश्यक कुरामा हस्तक्षेप गर्ने खालकी सासू छिन् होला त्यसैले सासू बुहारी बीच सम्बन्ध राम्रो भएन होला भनेर धेरैले सोच्ने गर्छन् तर, सबै अवस्थामा यस्तो हुँदैन ।
नतिजास्वरुप धेरैजसो अवस्थामा सामञ्जस्यतामा थोरै कठिनाइ आउँदा पनि बुहारीले कानूनी बाटो अपनाउँछन् वा कानूनी उपचारको धम्की दिन्छन् । वर्षौं देखि सासूले शान्तिपूर्ण तरिकाले राम्रोसँग चलाएको घरमा आएर बुहारीले उनलाई छुच्ची सासूको दर्जा दिन्छिन् ।
सत्य त यो पनि हो कि धेरैजसो बुहारीहरु आफ्नो हक त माग्छन् तर कर्तव्य निभाउँदैनन् । सासूलाई सम्मान गर्न उनीहरुलाई आउँदैन । सानो कुरा पनि सहन सकदैनन् र बबाल मच्चाउन थाल्छन् । यसै कुरालाई लिएर उनीहरु पतिसँग झगडा गर्न सुरु गर्छन् ।
गल्ती सँधै बुहारीको मात्रै पनि हुँदैन । वास्तवमा युवतीहरुलाई सानैदेखि सासू तिम्रो सबैभन्दा ठूलो दुश्मन हो भन्ने कुरा सिकाइन्छ । विवाह गरेर पतिको घरमा जानुभन्दा पहिले नै कडा सासूको डर उनीहरुको दिमागमा मनोवैज्ञानिक रुपले हावी हुन्छ ।
धेरै जसो सासूको गुनासो हुन्छ कि बुहारीले मुखमुखै लागेर जवाफ दिन्छन् । यस्तोमा झगडा बढ्छ समस्या तब हुन्छ जब बुहारीका माइतीपक्षले बुहारीलाई समर्थन गरेर उनीहरुलाई भड्काउन थाल्छन् ।
अहिलेका बुहारीहरु शिक्षित र धेरै कुरा बुझेका छन् त्यसैले उनीहरुले सासुलाई आफ्नो आमा सरह व्यवहार गर्नुपर्छ । बुहारी झगडालु भएमा त्यसको पहिलो नकरात्मक प्रभाव परिवारमा पर्छ ।
घरमा झैझगडा भैरहेमा वृद्धवृद्धा भइसकेका सासूससूरालाई मानसिक समस्याले सताउँछ, उनीहरुलाई विभिन्न रोगहरुले सताउन सक्छ । घरमा सासूबुहारी बीच झगडा हुनाले समाजमा उनीहरुको यति बेइज्जती हुन्छ कि उनीहरु आफ्न्त छरछिमेक सबैसँग टाढा हुन खोज्छन् ।
सासूको छवि मिडिया र पुरानो सोच भएका मानिसहरुले नराम्रो बनाइदिएका छन् । उनीहरुलाई बुहारीको लागि दुश्मनको रुपमा प्रचारित गरिन्छ जुन एक महिलाको अधिकारहरुको लागि अन्याय हो ।
एक नयाँ अध्ययनको अनुसार महिलाहरु आफ्नो आमाद्धारा पनि हिंसाको शिकार हुन्छिन् तर यसमाथी उनीहरु ध्यान दिँदैनन् । तर, बाल्यकालमै युवतीहरुलाई सासूसँग घृणा गर्न सिकाइएको हुन्छ त्यसैले पतिको घर पुगेर उनीहरुले सासूलाई आफ्नो मुख्य दुश्मन सम्झिन थाल्छन् ।
धेरैजसो बुहारीले नराम्रो त्यतिखेर महसुष गर्छन् जब सासूबुहारीको झगडामा पतिले आफ्नो आमाको पक्ष लिन्छन् ।